ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: ရွှေကပြောသော ဗမာ
အမိမြန်မာပြည်မှ အကြောင်းအသီးသီးဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ထွက်ခွာလာခဲ့ကြရပေမယ့် နိုင်ငံရပ်ခြားလဲရောက်ရော ဘာသာမတူတာတွေရော၊ တိုင်းရင်းသား ညီအကိုသွေးချင်းတွေရော၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တစ်ခါမျှ မတွေ့မြင်သေးစေကာမူ ဗမာစကားဟူသော ဘာသာစကား တစ်ခုတူညီစွာ ပြောဆိုတတ်ကြရုံနဲ့ပင် ငါတို့လူမျိုး၊ ငါတို့စကားဆိုတဲ့ "ရွှေ"ဟူသော မျိုးချစ်စိတ်ကလေးနဲ့ပင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရင်းနှီးကြ၊ စကားပြောဆိုကြနဲ့ ရင်နှီးကျွမ်းဝင်လာကြပါတယ်။
တနေ့ ဒီကောင် ကျွန်တော်ဆီလာပြီး ကျွန်တော်တို့ရွှေစကား သူကိုသင်ပေးပါဆိုပြီး ပြောလာတယ်။ဗမာအချင်းချင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဘယ်လိုခေါ်လဲ ဥပမာ သူငယ်ချင်းဆိုရင် ဘယ်လိုလဲ မေးတော့ ကျွန်တော်က "ရွှေ" လိုပြောလိုက်တယ်။ဒါကိုသူက သူတွေ့သမျှ ဗမာတွေကို "ဟောင်းအာယူ...ရွှေ၊ ဟောင်းအာရူး..ရွှေ" ဆိုပြီး လိုက်ခေါ်တော့တာပဲ။သူရဲ့အသံကြားရတဲ့ ဗမာအားလုံးက ပြုံးစိစိနဲ့ လုပ်ပြတော့ ဒီကောင်က ကျွန်တော်ကို ဒီရွှေဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လာပြန်မေးတယ်။ ဘာလဲပေါ့။ ကျွန်တော်ကလဲ အင်္ဂလိပ်လို ဂိုး(Gold)လို့ ရှင်းပြလိုက်တော့ ဘာလို့ဒီလို ရွှေလိုခေါ်တာလဲမေးတော့ ကျွန်တော်လဲ ဘယ်ရမလဲ အာရှလူလည်သား မဟုတ်လား။လက်ကိုင်ဖုံးထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားပုံတော်ပြပြီး ဒါက ငါတို့တိုင်းပြည်က ရွှေတိဂုံဘုရား။ ရွှေတွေ အများကြီးလှုထားတာတွေ့လား။အေးဒါကြောင့် ငါတို့က ဘုရားတောင် ရွှေနဲ့လှုထားနိုင်လို့ ငါတို့လူမျိုးကိုငါတို့ “ရွှေ”လို့ခေါ်ရတာလို့ ပြောလိုက်တော့မှ ဘသာချောလဲ ခေါင်းတညိမ်ညိမ့်နဲ့ ပါးစပ်ကနေ “ရွှေ...ရွှေ” လိုဆိုပြီး ထွက်သွားပါတော့တယ်။
ဒီကုလားတွေက ဒီလိုတွေပြောထားမှ မဟုတ်ရင် ဒီကောင်တွေက ကျွန်တော်အလုပ်ဝင်စကဆို မင်းဘယ်ကလဲ ဆိုတာအရမ်းမေးတယ်။"ဘာမား"လိုပြောရင် မသိသလိုလ၊ို မကြားဘူးသလိုလို ပုံစံလုပ်ပြပြီး ဒီကောင်တွေက ဘယ်နေရာလဲ၊ဘယ်မှာလဲ စသဖြင့် မေးခွန်းတွေလာပြန်ရော။ဒီတော့ ကျွန်တော်က "မင်းတို့ ကျောင်းတုန်းက ဂျီအိုဂရပ်ဖီ(Geography)မသင်ဘူးလား။မသင်ဘူးရင်လဲ မှတ်ထား မင်းတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ဘက်က အိမ်နီးချင်းက ငါတို့နိုင်ငံလေ။ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်စုကြည်ကို မသိဘူးလား။"လိုမေးတော့မှ "အို ရက်စ်..ရက်စ်။အိုင်စီး" နဲ့ ဘာတွေရက်ပြီး ဘာတွေစီးသွားမှန်းတော့ မသိဘူး တရက်ထဲရက်ပြီး ဖိနပ်ဟောင်းတွေစီးသွားမှ တိုရွှေနိုင်ငံကို ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်က မှန်းသိသွားပါတော့တယ်။
စာရေးသူ Unknown အချိန် 2:53 AM
ကာရံဆူး October 9, 2009 at 3:30 AM
အင်း ဟုတ်တယ်..ကာရံလည်း မြန်မာဆိုပြီး အထင်သေးမခံချင်ဘူး..အဲ့လိုမျိုး ပြောထားတာ ကောင်းတယ်..အားပေး ထောက်ခံသွားပါတယ် ကိုချမ်းလင်းနေရေ..ရွှေကွ..
အဲ ၁ ရော ၂ရော ရတယ်..
၃လည်း ရဦးမလား မသိဘူး..
ကာရံဆူး October 9, 2009 at 3:31 AM
အနန္တော အနန္တ ငါးပါး ဦးထိပ်ထားလို့ ..၅
တော်ပြီ နောက်လူတွေ တောက်ခေါက်နေဦးမယ်...ခြောက်ထိပေါ့..:P
ကာရံဆူး October 9, 2009 at 3:33 AM
အဲ မေ့သွားလို့ ..ရွှေတိဂုံ ဘုရားကြီးကို တစ်ဝကြီး ဖူးသွားတယ်နော်..အရမ်း သပ္ပာယ်တာပဲ...
မချစ်ရ October 9, 2009 at 4:01 AM
အနော် October 9, 2009 at 4:20 AM
အကိုရေ ရွှေတိဂုံဘုရားကို တဝကြီးဖူးသွားပါတယ်အကိုရေ
မြန်မာဆိုတာ ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် မြန်မာပါပဲ
phoechan October 9, 2009 at 4:24 AM
ဟုတ်တယ်အကိုရေ။ ကျွန်တော်တို့ ရွှေနိုင်ငံတော်ကြီးကို မသိတာ မဟုတ်ဘူး။ သက်သက်မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး နှိမ်တာ။ ဘယ်သမိုင်းကိုပဲကြည့်ကြည့် ရွှေရောင်တောက်နေတာကို မနာလိုလို့ပြောတာလို့ပဲ သဘောထားလိုက်ပါ။
ကာရံဆူး October 9, 2009 at 4:43 AM
ဘယ်ရမလဲ..၁ ၁ နောက်တစ်ခါ ပြန်ယူသွားတယ်.. မချစ်ရတော့ တင်းနေပြီလားမသိ..:P
Angel Shaper October 9, 2009 at 4:45 AM
ဒေါ်ကာရံ အတော် သောင်းကျန်းနေပါလားဟင်။
တိန် တိန် တိန်။။။ ဟိဟိ
ဟုတ်ပါ့နော်။ မြန်မာ (ဘားမား)ရှင်းလိုက်ရတာ အကြိမ်ကြိမ် စိတ်တောင် ရှည်နေပြီ။ ဟိဟိ
စိမ်း... October 9, 2009 at 5:19 AM
ဘုရားပုံတော်က အရမ်းကို ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်
ကာရံဆူး October 9, 2009 at 6:05 AM
သူများ တစ်ခါတစ်လေ ၁ ယူတာကို နာလိုကြဘူး...ကရော် ကရော်..
မိုးစက်ပွင့်လေး October 9, 2009 at 6:43 AM
emayarKhin October 9, 2009 at 7:55 AM
မောင်သီဟ October 9, 2009 at 7:57 AM
ဟဲဟဲ အဲဒီအကြောင်းဆိုရင် ကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့
ကုလားက မေးတယ် အစ်ကိုလို့ခေါ်ရင်ဘယ်လိုပြောရလဲ
တဲ့ ငါ့နှမလင် လို့သင်ပေးလိုက်ရော
လူကြားထဲလဲ ငါ့နှမလင် တဲ့ဗျာ သူမြန်မာစကားတတ်
peter kyaw October 9, 2009 at 8:01 AM
oh!! I see , that's why shwe !!!
ဝက်ဝံလေး October 9, 2009 at 11:58 AM
ကိုရေချမ်းရေ ဟိဟိ ရီရတယ်နော်
ဒီမှာ ဒီလိုပဲ ဘယ်ကလဲ ဆိုရင် ဘားမား ဆို သိဘူးတဲ့ ဒါနဲ့ near Thailand and China ဆိုမှ အိုးးးးး သိပြီ သိပြီဖြစ်နေတာ သူတို့သိတာ တရုတ်နဲ့ ယိုးဒယားသိတာလေ မြန်မာကိုသိတာဟုတ်ဘူးရယ် သိပ်မျက်နှာငယ်တာပဲသိလား ညီမကို ဆိုသိပ်မေးတယ် ယိုးဒယားကလား ဖလစ်ပိုင်ကလားနဲ့ ဟုတ်ဘူး မြန်မာကဆို သိတော့ဘူး သိလား သိပ်အသည်းနာတာပဲ တော်ပြီ ပြောတော့ဘူး
လင်းကြယ်ဖြူ October 9, 2009 at 4:47 PM
တစ်ချိန်တုန်းက စင်္ကာပူနိုင်ငံကတောင် အတုယူရတယ်ဆိုပဲ
လင်းငယ် October 10, 2009 at 4:56 AM
အိုး အိုင်စီး ကိုချမ်းလင်းနေ.. ဟဲဟဲ... ကောင်းတယ် အဲ့လိုလေး ပြောပေးထားမှ
မြစ်ကျိုးအင်း October 10, 2009 at 5:01 AM
တချို့နိင်ငံတွေက မြန်မာနိင်ငံကို သေသေချာချာ မသိပေမယ့် အမေစုကိုတော့ သိကြတယ်...။
ဒီနိင်ငံမှာ အမေစု ပုံတွေ ချိတ်ထားတဲ့ ဆိုင်တောင် ရှိတယ် ။
ကိုလူထွေး October 10, 2009 at 7:52 AM
လူလည်ကလည်း ကျတတ်ပါပေ့ ကိုချမ်းရယ်...း)
တော်သေးတာပေါ့ ရွှေဆိုပြီး "ငရွှေ့" ပုံကိုထုတ်မပြလို့... အဲဒါဆို ဒီငနဲ တခါထဲ ထိုးအန်သွားအုန်းမယ်...
စိတ်၏ဖြေရာ October 11, 2009 at 11:57 AM
အိအိချောကလျာ October 15, 2009 at 8:31 AM
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကိုတွေ့လိုက်တိုင်း သတိရမိတယ်၊ ကျမလည်း ရွှေတိဂုံဘုရားကို တစ်ခေါက်ရောက်ဖူးတယ်။